‘सावधानी अपनाए कोरोनाबाट बच्न सकिन्छ’
काठमाडौं । विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना (कोभिड–१९)को रोकथामका लागि यस सातादेखि नेपाल सरकार अझै सक्रिय भएर लागेको छ । चीनको वुहानबाट देखिएको यो भाइरस विश्वका १५० मुलुकमा पुगिसकेको छ । बिहीवारसम्म विश्वभर २ लाख १९ हजारलाई कोरोनाको संक्रमण प्रमाणित भएकोमा ९ हजारले यसैबाट ज्यान गुमाइसकेका छन् ।
अहिलेसम्म नेपालमा यसको संक्रमण आम रूपमा देखिएका छैन (डेढ महीनाअघि एकमा देखिएकोमा ठीक भइसकेको छ) । यद्यपि विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललाई समेत खतराको सूचीमा राखेको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा करीब २०० जनामा यसको संक्रमण देखिएको छ भने यसबाट त्यहाँ बिहीवारसम्ममा चारजनाको मृत्य भइसकेको छ । कोरोना संक्रमण फैलनबाट रोक्न भन्दै भारतले नेपालतर्फका २० ओटा नाका बन्द गरेको छ । खुला सीमाकै कारण त्यो कदम मात्र पर्याप्त नभएको सरोकारवालाहरूले औंल्याएका छन् । त्यसैले यसबाट बच्न सबैले पूर्वतयारी अपनाउनुपर्ने जनस्वास्थ्यविद्हरूले सुझाएका छन् ।
बुधवार मात्रै सरकारले कोरोनासम्बन्धी हालसम्मकै महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । सरकारले वैशाख ३ सम्म ५५ देशबाट हुने आवागमन रोकेको छ । यस्तै भीडभाड हुने क्षेत्रमा निगरानी बढाएको छ भने स्कूल÷कलेज पनि बन्द गरिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका स्वास्थ्य आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रका प्रमुख सागर दाहालले विदेशबाट आउनेलाई अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइनमा राखिएको बताए । उनका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालय र मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायले स्वास्थ्य क्षेत्रको अध्ययन गरिरहेका छन् । ‘प्रदेशसँग पनि सहकार्य गरी यसबाट बच्ने पूर्वतयारी अपनाउने तयारी गरिएको छ,’ उनले बताए ।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाकी प्रमुख डा. रुणा झाका अनुसार हालसम्म ५०० जनामा कोरोना जाँच गरिएकोमा एक जनाबाहेक सबैमा नतीजा नेगेटिभ रहेको छ । देशमा कोरोना भाइरसको परीक्षण किट पर्याप्त भएको उनले बताइन् । आइसोलशनमा भएका बिरामीको नियमित रूपमा स्वास्थ्य जाँच भइरहेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार अहिलेसम्म आइसोलेशनमा राखिएका बिरामीको मात्रै परीक्षण गरिएको हो । शुक्रराज ट्रपिकल एन्ड सरुवा रोग अस्पतालका कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डा. अनुप बास्तोलाले विश्व स्वास्थ्य संगठनले औंल्याए अनुसारका लक्षण देखिए बिरामीलाई आइसोलेशनमा पठाइने गरेको बताए ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण वृद्ध र रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति कम भएकालाई हुने सम्भावना बढी भएकाले यस्ता व्यक्तिको हेरचाहमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. वासुदेव पाण्डेयले बताए । सरकारले पर्याप्त सावधानी अपनाएकाले नागरिकले पनि सतर्कता अपनाए यसबाट बच्न सकिने उनको भनाइ छ ।
जनस्वास्थ्यविद् डा. समीरमणि दीक्षित रोग प्रतिरोधी शक्ति बढी भएका ८५ प्रतिशत युवामा यो सामान्य लक्षणसहित निको हुने भएकाले नआत्तिन सुझाउँछन् । तर बजारमा मास्क र स्यानिटाइजर जस्ता सामग्रीकै पनि अभाव भएकाले सरकारले यस्ता सामग्रीको सहज व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
सुक्खा खोकी लाग्नु
श्वास–प्रश्वासमा समस्या हुनु
छातीको दुवैतर्फ निमोनिया हुँदा जस्तै लक्षण देखिने आदि
पटक पटक साबुनपानीले हात धुने
अनिवार्य मास्क प्रयोग गर्ने
फ्लू जस्तो लक्षण देखिएकासँग टाढा रहने
माछामासु राम्रोसँग पकाएर मात्रै खाने
फ्लू जस्तो लक्षण देखिएमा चिकित्सकसँग परामर्श गर्ने
कोरोना भाइरस संक्रमणको शंका लागेमा नजिकको चिकित्सकसँग परामर्श लिने
‘आत्मबल बढाउँदा कम हुन्छ मानसिक रोगको जोखिम’ [२०७६ चैत, १२]
कोभिड–१९ : घरबाट पनि परामर्श लिन सकिन्छ, अस्पताल जान नहत्तारिऔं [२०७६ चैत, १०]
सामाजिक दूरीले घट्ला कोरोना भाइरसको संक्रमण ? [२०७६ चैत, ९]
[Mar 20, 2020 03:54am]
जिन्दगी हाम्रै हातमा छ । त्यसैले हात धोऔं । तन, मन र आफु वरपर समेत सफा राखौं । तन र मन सफा भएपछि बाँकी कुराहरू पनि ठीक हुँदै हुनेछन् । बाँच्यौं भने कमाउँला । कोरोनासँगको योयुद्धमा हामी हार्ने खेल खेल्नै हुन्न । तर नहार्न खेलका नियम पनि पालना गर्नैपर्ने हुन्छ ।